← प्रेमले बाँच्ने इच्छा बढाउँछ	पदाभित्रकी अर्की अनुराधा →	कथा भित्रको वास्तवित्ता . यस्तो भ्रममा नपरौ………………।	07
रबिन प्रसाद थपलिया एक जना युबक आफनो परिबारको राम्रो उन्नती र प्रगतीको लागि भन्दै हत्या हिँसा, जे गर्न पनि पछि नपर्ने रहेछन् । जहिले पनि आफनो परिबारको खुसी, श्रीमतीको इच्छा र बालबच्चाको भबिश्यको लागि भन्दै हजारौको मन रुवाएर एउटा परिबारको खुसीको लागि गल्ली गल्लीमा बसेर लुटपाट गर्ने, मानिस अपहरण गर्ने र फिरौती रकम माग्ने जस्ता गलत काम गर्ने गर्दा रहेछन ।
गुरुको सिकायत अनुसार उनि घर गए । ढिलो पुगेकाले उनको श्रीमतीले खाना नखाई बसीरहेको रहीछन् । ति युवक गएर सोफामा पल्टीए गुरुले सिकाए जस्तै गरेर उनी पल्टीए । श्रीमतीले खान बोलाइन तर उनि उठेनन श्रीमानलाई हेर्दा इन्तु चिन्तु । सासु, ससुरा सबैलाई बोलाइन । सवैको रुवाबासी भयो छातीमा छामे स्वास छैन सबै छातीपिटी पिटी रुन थालेछन् । मेरो प्राण मलाई आज छाडेर जानुभयो अव म को भनेर बाँच्ने ? भन्दै श्रीमती अलाप बिलाप गदै रुन लागिन । बुढा बुढी यो उमेरमा हामीजानु पर्ने छोरो गयो भन्दै रुन थाले । त्यतीकैमा ति गुरु त्यहाँ पुगे । सबैको रुवाबासी थियो के भयो भन्दा सबैले घटनाको बारेमा बताए । त्यसपछि बिद्धानले युवकलाई हेरेछन् र भनेछन म यि युवकलाई बचाउन सक्छु तर त्यसको लागि एउटा सर्त छ भनेछन् । उ बाँच्छ भने हामी जे सुकै पनि मान्न तयार छौ भनेर सबैले भनेछन् । तब बिद्धानले भनेछन उसलाई म बचाँउछु तर उसको बदलामा तपाँइहरु मध्य कोहि मर्नुपर्ने हुन्छ् उसलाई बचाउनको लागि कस्ले आफनो ज्यान दिन सक्नु हुन्छ भनेर बिद्धानले सोधेछन् । सबै मुखामुख गर्न थालेछन् । कसैले पनि म मर्न तयार छु भन्न सकेनछन् । बुढीले भनिछन् म मरि भने मेरो बुडाको स्याहार सुसार गर्ने कोहि हुदैनन घरको हेरबिचार गर्ने कोहि हुदैनन म त मर्दीन भनेर पन्छीछन् । बुढाले भनेछन् मेरो यो अवस्था छ फेरी छोरो पनि मर्यो बुहारी अल्लारे बल्लारे छे उसलाई घर व्यवहार पनि थाहा छैन् म मरे भने त मेरो श्रीमती, बुहारी र परिबारकै बिजोग हुन्छ भनेछन् । सासु ससुराको कुरा सुनेपछि युवककी श्रीमतीले भनिछन म मरे भने यी लाला बाला छोराछोरीहरुको बिजोग हुन्छ् । म मरे र उहाँ बाँच्नु भयो भने उहाँले यि बच्चाको हेरचाह गर्न सक्नु हुन्न म मेरो मलाई उहाँले असाध्यै माँया गर्नुहुन्छ त्यसैले मेरो मृत्युको पिडामा उहाँले खप्न सक्नु हुन्न । जम्मा भएका उनका नातेदार कोहि मर्नेवाला नभएपछि ति युबक अचानक उठन पुगे । त्यहाँ भएका सबै मानिस अचम्ममा पर्न गए । त्यस पछि ति युवकले बिद्धानका कुरामा सहमत जनाए । र त्यसै दिन देखि अरुको खुसीको लागि भन्दै नराम्रो काम गर्न छाडने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र उनी त्यहाँबाट निस्कीए ।
त्यसैले यो दुनियाँमा जोडीने नाता भनेको स्वार्थको बन्धन मात्र हो । केहि हैनन् आफना । यहि माँयाको बन्धन र मोहमा फसेर मानिसले धेरै नराम्रा कामहरु गरीरहेका छन् । कसैको माँयामा लगेर आफुलाई बबाद पारीरहेका छन् । अरुको लागि भनेरनै आफुलाई बर्बाद पारीरहेका छन् । आफनो अमुल्य ज्यान आफैले फालीरहेका पनि छन् । Like this:Like Loading...
← प्रेमले बाँच्ने इच्छा बढाउँछ	पदाभित्रकी अर्की अनुराधा →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...